khetha zabo sponsors
Kuba bale mihla umntu kwi-intanethi yi enkulu isigaba sexesha, ezele iintlanganiso, partings, encounters, discoveries kwaye disappointments. Kubaluleke kakhulu ukuba i-world wide web kwamnceda ukuba yahlukanisa yokwenene ebomini, hayi ukuyibuyisela nge onesiphumo omnye.Enyanisweni, nangona kunjalo, asiyiyo ngoko ke kubalulekile apho kuwe zahlangana yakho soulmate: kwi-subway, i restaurant, ithala leencwadi, kwi-Intanethi, kubalulekile ukuba usenama-zifunyenweyo phakathi ezisixhenxe bhiliyoni abantu abahlala kwi iplanethi yethu. Indlela yokunceda ngokwakho kwi-befuna i-mate, yintoni imithetho Dating kwi-Internet.
Omnye umhlobo wam Olga kanye phezu Indebe ikofu waza wamxelela malunga yakhe shortest umhla kunye umntu. Yena, njenge ezininzi girls akholelwe enkulu, kwaye nyulu uthando, kodwa ukufumana yakhe kwi Dating site, hayi ingakumbi hoping, kodwa, ndagqiba kwelokuba zama oku indlela ingxowa-phupha abantu ngaphandle emileyo curiosity. Apha emsebenzini wayenolwazi kubasindisa ngomzuzu, kwaye kubekho inkqubela ngaphandle naziphi na iingxaki esayiniweyo phezulu kuba omnye kakhulu ethandwa kakhulu Dating site.Ngomhla we-usuku lokuqala ngokwembalelwano ka-Olga wavuma ukuya kuhlangana kunye omnye numerous candidates (njengoko ezaziwayo kwimicimbi yasekuhlalweni networks, blogs kwaye nkqu ngaphezulu kwi thematic zokusebenza kuba”ukwakha budlelwane nabanye”amadoda nabafazi ingaba kokukhona babenenkalipho kwaye hasty kwe kwi-real life). Umhlobo wam kwaye yakhe entsha umhlobo wavuma ukuya kuhlangana ngaloo njikalanga emva kokuba umsebenzi kwaye baba acquainted kwezinye cozy rock nge Indebe aromatic latte. Alas, zonke hopes ka-Olga kuba ngummangaliso ngokuhlwa wawa, xa yena wayibona kufutshane metro, ndabona ke ukuthetha”kugqityiwe ukukhula Ngelishwa”bam girlfriend ngoko nangoko emva greetings kwaye exchange ka-pleasantries, ifowuni rang kwaye wayengomnye banyanzeleka ukuba rush ngomsebenzi wabo urgent ishishini. Kodwa kwaba yokuba yakhe Beau waba low ukukhula, hayi phezulu anesihlanu kweenyawo zakhe, kwaye mhlawumbi kuphela ukutsiba. Ngokuqinisekileyo siya laughed kunye ngalo ibali kwaye resourcefulness Oli, kodwa guy ingu kancinci uxolo. Phezu babuyela ekhaya ukusuka yakhe elifutshane kakhulu ebomini Dating bam girlfriend ecinyiweyo yakhe inkangeleko ukusuka kule ndawo kwaye zange made na azame kuhlangana-intanethi. ngokungafaniyo kum.
Wam wokuqala amava Internet Dating wenziwe iselwa ngempumelelo, mna babehlala kunye mnandi umntu iminyaka emibini kwaye nkqu phantse jumped enye naye. eneneni, stories of ndonwabe couples abo zifunyenweyo ngamnye ezinye izinto kwi-Intanethi ingaba numerous, esingekhoyo surprising – nje yokucinga kangakanani ixesha ufuna ukuchitha kwiqonga loluntu kwaye ngeli surfing amaphepha. Elungileyo ezininzi iintlanganiso, kwaye weza kancinci ulonwabo ngu ngokwaneleyo ukuya kwi-intanethi kwaye ingalo kwabo kunye kuluncedo ulwazi, umzekelo, ukuba blunders ka-Internet Dating.
Imigaqo ye-intanethi Dating: enkulu”musa”
Hayi priukrasit ulwazi malunga ngokwakho ukuba kwintlanganiso hayi disappoint umntu, kodwa ngaxeshanye, ngathi xa ubona kwi kobuso alleged gentleman ke unspoken umbuzo,”kwaye apho relaxed ubuhle kunye apho siya corresponded.”. Honestly kwaye thoroughly (ezingama-isizathu) zalisa ifomu”malunga nam”, ngaphandle neglecting i-nokucoleka ka-ukukhula. Chaza yakho yangaphandle data (ubuncinane kwi-Jikelele mimiselo), yakho umdla kwaye uluhlu lwezinto ezikhethwayo. Oku kuya kuthintela kwenu ukususela imiba emininzi, kodwa kanjalo ngoko nangoko nika ezenzeka emhlabeni, ngokufanayo imixholo kunye umdla.
Musa ukudlala indima, kuba njengoko vala njengoko kunokwenzeka ukuba i-real. Kwi-Intanethi ivumela kuthi ukuba abe beautiful kwaye witty, kwaye erudite: kulula ukufumana elungileyo aphorism ukuze kwakhiwe isimo somsebenzi womnatha okanye sebenzisa kwindawo elungileyo joke, hetalia lula ukuba bavakalise umdla iindaba, impendulo phantse nasiphi na umbuzo uya kunika ukukhangela injini.Kwaye ngoku, classic kubekho inkqubela-blonde skillfully mimics ulwazi ukwenziwa kweenkqubo okanye ithi iinketho bepheka inyama, izahlulo wakhe uluhlu eyona iimifanekiso. Khumbula ukuba xa sihamba kwi-intanethi kuba umhla, lwakho lobuqu PC akuzi kufika aid, kwaye engqinelana nomthetho embellished ngokwakho kuya kuba lula.
Musa ukwenza ibone lomtshato mkhulu owenza ingeniso elide uluhlu iimfuno kuba esikhethiweyo enye, ngakumbi i-amanqaku kwi ezinzima kwaye ezibuhlungu tone. Khumbula ukuba akukho mntu ugqibelele, kwaye kuquka. Uthando ayikho kubukho ezintathu lemfundo ephakamileyo kunye emidlalo udidi kwaye ulwazi ezine iilwimi. Pretty stupid ukuba kokhula ukhula ngaphandle abantu yi-umbala amehlo kwaye iinwele. Ngubani owaziyo yintoni izicwangciso kuba unengxaki Destiny. Musa kuba pragmatic okanye boring, okanye overly romanticcomment dreamer, Jikelele mimiselo, chaza into attracts kuwe ngendlela abantu, abo baza kuba yintoni injongo osikhangelayo.
Musa xana ukubeka ukongeza yakho iphepha lemibuzo malunga noko omnye okanye ababini iifoto (umzekelo, umzobi photo kwaye epheleleyo ubude). Psychologically ke mnandi ukuba incoko kunye umntu ukwazi kuye kwi-ubuso, ingakumbi ukuba nani nkqu efana nayo. Thatha avareji iifoto, kodwa hayi ugqibelele umsebenzi umhleli Photoshop ukuba wanika kuwe umfanekiso apho uphumelele khange nkqu aqonde ngokwakho.
Enye yezinto ezisisiseko imithetho ngempumelelo kwi-intanethi Dating: lumka. Funda iphepha lemibuzo malunga nemifanekiso.Dlala detective iphepha loluntu womnatha wakho omtsha acquaintance, ngenyameko ukufumana phandle i-imeyili okanye UKULANDULA inani, igama kwi-Instagram umsinga, sebenzisa ukukhangela amandla kwaye bona yintoni bomgama ye-mfana kwi umsebenzi womnatha (yena blogs, izithuba kwi iiforam njalo-njalo) Ngoko ke, umzekelo, ungafumana ngaphandle kwangaphambili: hayi watshata, nokuba yakho entsha, umhlobo ukuba lowo ke onayo ezintlanu abantwana ukuba waba ngaphandle kwi-Intanethi na imiceli-kaham-Troll, okanye mhlawumbi wakhe umnxeba kwi-abanye abantu abamnyama base. Hayi, alikwazi ukwahlula paranoia, ngu kakuhle kwaye yendalo ubufazi curiosity.
Musa ukusebenzisa boilerplate imiyalezo. Kwa limited isixa-mali yakho free ixesha abangayi kuba i-kwesizathu ukuba ufuna ukuthumela wonke umntu onjalo wamkelekile. Ngaba ithemba ukuba yakho udibanisa ababonisi base-Prince akuthethi ukuba ukwenza oko, ngoko ke kufuneka yenze dev liberal. Sebenzisa umntu indlela, creative kwi-intshayelelo, ngaphantsi mazwi, kodwa bavumeleni kuba zabo ezahlukeneyo. Chances ukuma ngaphandle ukusuka indimbane kwaye inzala iya ngoko nangoko kwanda.
Musa kuba kakhulu pushy. Musa gamma entsha umhlobo (yena ufuna nawe yena ke ishumi), ngoko ke kamsinya uyabaleka umngcipheko annoying umntu, okanye nje frighten kwentloko yakhe. Musa hurry kuba ithumela imiyalezo ngoko ke ukuba omnye wayecinga ukuba ufumana umahlule kwi eziliqela okanye nje yakho imibuzo iimpendulo zinikwe kuwe nge enjalo isantya ukuba omnye umntu absolutely ifuna na into digest, kodwa nje ukufunda.
Xa unxibelelwano ngekhompyutha akukho yesitalato uqhagamshelwano phakathi kwabantu, ngoko ke amadoda nabafazi kuziphatha ngendlela ngakumbi relaxed hlobo kunokuba kwi-yokwenene ebomini. Kodwa ungalibali malunga eminye imithetho decency. Oku kuquka hayi kuphela ulawulo phezu lexicon, kodwa careless habit abanye girls ukunika ngaphandle kakhulu kakhulu ulwazi lobuqu malunga ngokwakho prematurely. Kufuneka ndalubona – kufuneka ndixelela xa ubune yakho yokugqibela ngesondo, kwaye kangakanani utshintshe partners.Imithetho decency kufuneka imposed kwaye recommendation kukuba zithungelana, kwaye hayi ukwenza xa ehambelana kunye umntu a interrogation.
Olude-awaited intlanganiso ngokunxulumene imithetho ngempumelelo kwi-intanethi Dating
Ideally, nyathelo lokuqala intlanganiso kufuneka kuvela indoda. kodwa oku kunzima ukusebenza ngokupheleleyo eyodwa, ukuba ngaba ingakunika caller ukuhlangabezana ebomini enyanisweni kwaye unobtrusively. Khetha ezimeleyo territory – café, Park elungileyo imozulu kwihlobo apho uza kukwazi zithungelana ngokukhululekileyo. Ezingaphezulu kakuhle akusebenzi kwenzakalisa, akukho trips ukundwendwela lokuqala (anesibini) imihla, iindawo a ngokwesiqu congestion abantu kwi-daytime kukho uninzi preferable.
Qinisa kangangoko hurry, kunye yokuqala umhla ayikho kukunceda kakhulu kuyo. Lokuqala kunjalo, kubalulekile inzala kuwe njengoko ukuba opposite sex ibe nokuqala ukuphela kude, kwaye ufuna nje unako seamlessly ukufudusa ukususela udidi”enokwenzeka girlfriendumhlobo”usiba-ii-pal ngaphandle apho, ngokutshintsha amaxesha amaninzi ifomu ingxoxo, kuya kuba nzima kakhulu. Kodwa kowesibini meko kuwe umngcipheko ukufunda ngaphambili lincinane ukuya k ubonakala ngathi kakhulu anomdla na uhlobo encounter, ngokulula ukuba inkunkuma zabo ezixabisekileyo ixesha
← Ividiyo iincoko yehlabathi